के तपाईंको संगठन ठूलो डाटा प्रयोग गर्न तयार छ? | Martech Zone
ठूलो डाटा अधिकांश मार्केटिंग संगठनहरूको लागि वास्तविकता भन्दा बढी आकांक्षा हो। बिग डाटाको रणनीतिक मूल्यमा बृहत सहमतिले डाटा इकोसिस्टमको संरचना र व्यक्तिगत संचारमा जीवनका लागि कुरकुरा डाटा-संचालित अंतर्दृष्टि ल्याउन आवश्यक नट-ए-बोल्ट प्राविधिक मुद्दाहरूको असंख्य मार्गलाई मद्दत पुर्‍याउँछ।
तपाईं सात प्रमुख क्षेत्रहरूमा संगठनको क्षमताहरूको विश्लेषण गरेर ठूलो डाटाको लाभ उठाउनको लागि संगठनको तयारीको आकलन गर्न सक्नुहुन्छ:
रणनीतिक दृष्टिकोण व्यवसायका उद्देश्यहरू पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदानकर्ताको रूपमा ठूलो डाटाको स्वीकृति हो। सी-सुइट प्रतिबद्धता र खरीद-इन बुझ्नु पहिलो चरण हो, त्यसपछि समय, फोकस, प्राथमिकता, संसाधन, र उर्जाको बाँडफाँड पछि। कुरा गर्न सजिलो छ। रणनीतिक छनौट गर्ने र कार्य तहको डाटा वैज्ञानिकहरू, डाटा विश्लेषकहरू र डाटा-केन्द्रित मार्केटरहरू जसले वास्तवमा काम गर्दछन् उनीहरू बीच बारम्बार बिच्छेदनको लागि हेर्नुहोस्। प्राय: निर्णयहरू पर्याप्त कार्य-स्तर इनपुट बिना नै गरिन्छ। प्राय: माथिको दृश्य र बीचबाट दृश्य आमूल फरक हुन्छन्।
डाटा इकोसिस्टम ठोकरको ब्लक वा सक्षमकर्ता हुन सक्छ। धेरै कम्पनीहरू लिगेसी प्रणाली र डूब लगानी द्वारा फन्दामा छन्। प्रत्येक फर्मको स्पष्ट भविष्य दर्शन अवस्थित प्लम्बिंगमा म्याप गरिएको हुँदैन। आईटी ल्यान्डस्केपको टेक्निकल स्टुइडहरू र सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरूको बृद्धि गर्ने ब्यापारी प्रयोगकर्ताहरू बीच प्रायः घर्षण हुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा अग्रेषित दृष्टि workaround को संग्रह हो। भ्रममा थप्न 3500 XNUMX००+ कम्पनीहरूले टेक समाधानको सबै तरीका प्रस्तुत गर्दै समान दावीहरू गर्दछन्, समान भाषा प्रयोग गरेर समान सौदाहरू प्रदान गर्दै।
डाटा प्रशासन डेटा स्रोतहरू बुझ्ने सन्दर्भमा, अन्तर्ग्रहण, सामान्यीकरण, सुरक्षा र प्राथमिकताका लागि योजना राख्दछ। यसका लागि चुस्त सुरक्षा उपायहरूको संयोजन आवश्यक छ, स्पष्ट रूपमा परिभाषित अनुमति प्रणाली र पहुँच र नियन्त्रणका लागि मार्गहरू। प्रशासन नियमहरू गोपनीयता र लचिलो प्रयोग र डाटाको पुनः प्रयोगको अनुपालन सन्तुलन। प्रायः यी मुद्दाहरू राम्रोसँग डिजाइन गरिएका नीतिहरू र प्रोटोकलहरू प्रतिबिम्बित गर्नुको साटो परिस्थितिमा गाँसिन्छ वा मिल्दछ।
एप्लाइड एनालिटिक्स स how्गठनले कत्ति राम्रो विस्तार गरीरहेको छ भन्ने सूचक हो विश्लेषण संसाधन र सहन गर्न कृत्रिम बुद्धि र मेशिन शिक्षा ल्याउन सक्षम छ। महत्वपूर्ण प्रश्नहरू: के एक संगठनसँग पर्याप्त छ? विश्लेषण संसाधनहरू र कसरी उनीहरूलाई खटाइन्छ? छन् विश्लेषण मार्केटिंग र रणनीतिक कार्यप्रवाहहरूमा इम्बेड गरिएको, वा तदर्थ आधारमा ट्याप गरिएको? छन् विश्लेषण प्रमुख व्यापार निर्णयहरू ड्राइभि र अधिग्रहण, अवधारण, लागत घटाउने र वफादारी मा ड्राइभि effic् क्षमता?
टेक्नोलोजी पूर्वाधार अधिकांश कम्पनीहरूमा प्रवाहित डाटाको टोरेन्ट इन्जेस्ट गर्न, प्रक्रिया गर्न, सफा गर्न, सुरक्षित गर्न र अपडेट गर्न प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर र डाटा संरचनाहरूको मूल्या as्कन गर्दछ। कुञ्जी संकेतकहरू डाटा सेट सामान्य गर्न, व्यक्तिगत पहिचान समाधान गर्न, अर्थपूर्ण खण्डहरू सिर्जना गर्न र निरन्तर नयाँ रिअल-टाइम डाटा लागू गर्न र लागू गर्न स्वचालन र क्षमताहरूको स्तर हो। अन्य सकारात्मक सूचकहरू ईएसपीहरू, मार्केटि auto स्वचालन, र क्लाउड कम्प्यूटिंग आपूर्तिकर्तासँग गठबन्धन हुन्।
केस विकास प्रयोग गर्नुहोस् फर्मको क्षमतालाई उपाय गर्दछ वास्तवमा उनीहरूले स collect्कलन र प्रक्रिया डाटा प्रयोग गर्न। के तिनीहरूले "सर्वश्रेष्ठ" ग्राहकहरू पहिचान गर्न सक्छन्; अर्को उत्तम प्रस्तावहरूको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ वा सम्भावित वफादारहरूको पालनपोषण गर्नुहुन्छ? के तिनीहरूसँग निजीकृत सन्देशहरू सिर्जना गर्न, माइक्रो-सेग्मेन्टेसन गर्न, मोबाइल वा सोशल मिडियामा व्यवहारको जवाफ दिन वा धेरै च्यानलहरूमा वितरण गरिएको बहु सामग्री अभियान सिर्जना गर्न औद्योगिक संयन्त्र छ?
गणित पुरुषहरूलाई अँगाल्ने कर्पोरेट संस्कृति को एक सूचक हो; नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ प्रविधिहरू अन्वेषण गर्न, ग्रहण गर्न र प्राप्त गर्न संगठनको वास्तविक भोकको नाप। सबैले डिजिटल र डाटा रूपान्तरणको बयान गर्नका लागि स्पाउट्स गर्दछन्। तर धेरैलाई डब्ल्यूएमडीहरू (गणित अवरोधको हतियार) डराउँछन्। कम थोरै कम्पनीहरूले डाटा केन्द्रिततालाई मौलिक कर्पोरेट सम्पत्ति बनाउन समय, स्रोत र नगद लगानी गर्छन्। ठूलो डाटा तयारीमा पुग्न लामो, महँगो र निराशाजनक हुन सक्छ। यसलाई सँधै दृष्टिकोण, कार्यप्रवाह, र प्रविधिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आवश्यक पर्दछ। यस सूचकले भविष्यको डाटा प्रयोग लक्ष्यहरूका लागि संगठनको वास्तविक प्रतिबद्धता मापन गर्दछ।
बिग डाटाका फाइदाहरू बुझ्नु भनेको प्रबन्धन परिवर्तनमा व्यायाम हो। यी सात मापदण्डहरूले हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन स्पेक्ट्रममा दिइएको संगठन कहाँ पर्दछ भन्ने बारे स्पष्ट आँखा प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईं कहाँ हुन चाहनुहुन्छ भनेर बुझेर तपाईं कहाँ बन्न चाहानुहुन्छ उपयोगी हुन सक्छ यदि व्यायाम व्यायाम गर्नुहोस्।
टैग: लागू गरिएको एनालिटिक्सठुलो डेटाठूलो डाटा पूर्वाधारठूलो डाटा प्रयोग केसव्यवस्थापन गर्नुहोस्डिजिटल क्रान्ति मार्फत नाचडाटा इकोसिस्टमडाटा प्रशासनगणितगणितरणनीतिक दृष्टिटेक्नोलोजी पूर्वाधारकेस केस